Wednesday May 20, 2020 - 16:01:38 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Himba waxa uu ka mid yahay qowmiyadaha ku dhaqan dalka Naamiibiya ee dhaca Koonfur Galbeed ee qaaradda Afrika. Naamiibiya waxa ku dhaqan dhawr qolo oo kale oo la kala yiraahdo Saan, Herero iyo weliba Nama.
Horraantii qarnigii tegey gumeysigii Jarmalku waxa uu dalkaas ku xasuuqay dad kor u dhaafaya boqol kun (100,000) oo isugu jira carruur, waayeel, dumar iyo ragba. Gumeysigii Jarmalku waa ku guuleysan waayey in uu dadka diimihii dhaqanka ahaa (traditional religions) ee ay haysteen uu ka beddelo wixii uu wateyna geliyo, balse Alle mahaddii kooxdan yar ee aan ciidanka ahayn, hubna aan sidan ayaa ku guuleysatey in ay Alle (swt) magiciisa iyo qiritaankiisaba dadkan gaarsiiyaan iyaga oo aan awoodna adeegsan, cidna khasbin.
Taasi waxa ay meesha ka saareysaa in Islaamku meelo badan uu ku gaarey dacwo marka laga reebo meelaha ay nidaamyadu ka jireen, oo dagaal kala hor yimi fiditaanka Islaamka mooyee, kuwaasina waa waajib in lala daggaallamo oo qori caaraddii lagu jabiyo awoodda markaa jirta, Islaamkuna nin xabbad iyo Taangi haysta baryo u la tegin ee garba gar baa la tusaaye meel walba xaaladeedda ayey leedahay Allaahu Akbar.
Isha qoraalka: Suldaan Garyare